thinzar's blog: IT and Gender
IT and Gender ဆိုတဲ့ topic ကို အမြဲ တွေ့နေရတယ်။ IT field ကို စဝင်ကတည်းက သူငယ်ချင်းတွေ ဆရာတွေ အမြဲ ပြောနေကြပေါ့။ အစတုန်းကတော့ ကျမ လက်မခံနိုင်ခဲ့ဘူး။ မိန်းကလေးတွေကို ယောကျာ်းလေးတွေလောက် မတော်ဘူး၊ IT field မှာ ဝင်ဆံ့ဖို့ မလွယ်ဘူး လို့ ပြောတာလောက် မုန်းတာ မရှိခဲ့ဘူး။ အရင်တုန်းကပါ။ အခုတော့လည်း လက်ခံသင့်သလောက်တော့ လက်ခံနိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ကျမ Computer Science ကို လေးနှစ်တက်ခဲ့တယ်။ (ကျောင်းပြီးတာ မနေ့တစ်နေ့ကပေါ့။) အမြဲလည်း စဉ်းစားခဲ့တယ်။ IT field မှာ ကျွမ်းကျင်မှုက Gender နဲ့ ဆိုင်သလားဆိုတာပေါ့။ ကျမကို သင်ခဲ့တာ ဆရာမထက် ဆရာအရေအတွက်က ပိုများလိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်။ တော်တဲ့ ဆရာမတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများအားဖြင့် စာတွေ ဖတ်ပြနေတာဘဲ များတယ်။ ဆရာတွေလောက် လက်တွေ့ပိုင်းမှာ သိပ်မသင်ပေးနိုင်ဘူး။ စာအတူလုပ်၊ assignment, project အတူလုပ်ခဲ့ဖူးတာလည်း မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းထက် ယောကျာ်းလေး သူငယ်ချင်းက ပိုများတယ်။ ယောကျာ်းလေးတွေက စာသာ မရရင်နေမယ်။ လက်တွေ့ပိုင်းမှာတော့ အမြဲတမ်း မိန်းကလေးတွေထက်သာတယ်။ မိန်းကလေးတွေက သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို ကျေအောင် ထိုင်ဖတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့က စာနဲ့ မဆိုင်တဲ့ technology အသစ်တွေကို စမ်းသပ်နေမယ်။ စိတ်ဝင်စားတာ တစ်ခုခုတွေ့ပြီဆိုရင် မပြီးမချင်း မစားမသောက်၊ စာမေးပွဲ ကျချင်ကျဆိုပြီး သူတို့ စိတ်ဝင်စားတာကိုပြီးအောင် လုပ်လိမ့်မယ်။ ကျမတို့တော့ အဲလိုဘယ်လုပ်နိုင်ပါ့မလဲ။ စာမေးပွဲကျမှာကို ကြောက်ရတာနဲ့ အမှတ်များချင်ရတာနဲ့ တစ်ခြားစိတ်ဝင်စားတာတွေကို လှည့်မကြည့်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ။ ဉာဏ်ကလည်း တော်တော်ကောင်းကြတယ်။ စာမေးပွဲအတွက် ကျမတစ်ပါတ်လောက် ကျက်ရတဲ့ စာကို သူတို့တွေက တစ်ရက်တည်းနဲ့ ပြီးအောင် ကျက်ကြတယ်။ လေးစားပါတယ်။
နောက်ပြီး အံ့ဩသွားတာက တစ်ရက်ကပေါ့။ design project presentation မရောက်ခင် တစ်ရက်အလို မိန်းကလေးတွေအားလုံး ဒီဇိုင်းလုပ်ဖို့ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်တော်ချောတွေက ဘာလုပ်နေတယ်ထင်လဲ။ Adobe Photoshop CS3 နဲ့ လုပ်ချင်လို့ RapidShare ကနေ download လုပ်ပြီး crack ထိုင်ရှာနေတယ်။ project ပြီးပြီး မပြီးပြီး သူတို့က သိပ်ဂရုစိုက်တာ မဟုတ်ဘူး။ လုပ်ချင်တာ လုပ်ရရင် ပြီးရော။
နောက်တစ်ခုက conversation.. ကျမသတိထားမိသလောက် မိန်းကလေးတွေရဲ့ conversation မှာ latest technology အကြောင်းတွေ မပါသလောက်ကို ရှားတယ်။ IT ကျောင်းသူအချင်းချင်းတွေ့ရင်တောင် အားလို့ မပြောကြဘူး။ ယောကျာ်းလေးတွေကြတော့ မဟုတ်ဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်က တစ်ခုခု သိပြီဆိုတာနဲ့ ပြောကြဆိုကြ ငြင်းကြ ခုံကြပြီ။ အဲဒါ ဘယ်လို ခေါ်မလဲ။ သဘာဝလို့ဘဲ ခေါ်မလား။
နောက်… IT ကျောင်းသူ အများစုက windows ကို format ချရမှာ သေမလောက် ကြောက်နေကြတဲ့ အချိန်မှာ ယောကျာ်းလေးတွေက windows format ချတာ မပြောနဲ့ dual boot သွင်းတာတောင် game ကစားသလောက် ခက်တယ်လို့တောင် မမှတ်ကြဘူး။ windows crash ဖြစ်သွားရင် မိန်းကလေးတွေက ကမာ္ဘပျက်မလောက် ဝမ်းနည်းနေတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ကတော့ အေးဆေးဘဲ။ crash ဖြစ်တော့လည်း အသစ်သွင်းတာပေါ့တဲ့။
ပြီးတော့ ကျမတို့တွေ final year project ကို ကုန်းရုန်းပြီး လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ အတန်းထဲက ကျောင်းသားတွေက windows ကို Mac ပုံစံထွက်အောင် effect ထည့်ရတာနဲ့ SUSE တို့ Windows XP တို့မှာ Vista လို Aero effect ရအောင် ပြောင်းနေတာနဲ့ အချိန်ကုန်နေတယ်။ တကယ်လည်း presentation ရောက်ရော စာနဲ့ဆိုင်တာကော မဆိုင်တာကော ထည့်ပြောပြီး အမှတ်တွေ အများကြီး ရသွားကြတယ်။
IT field မှာ ဘာလို့ ယောကျာ်းလေးတွေ ပိုပြီးအောင်မြင်နေရသလဲဆိုတော့ သူတို့က လုပ်ချင်တာကို ဦးစားပေးပြီး ကျမတို့တွေက လုပ်သင့်တာကို ဦးစားပေးနေလို့ လို့ဘဲ conclusion ဆွဲလိုက်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒါဘဲ ကောင်းပါတယ်။ အားလုံး လုပ်ချင်တာတွေ တူနေရင် လောကကြီးက မမျှတဘဲ တစ်ဘက်စောင်းနင်း ဖြစ်သွားမှာပေါ့။
(ယောကျာ်းလေးတိုင်း တော်သည် လို့ မပြောချင် သလို မိန်းကလေးတိုင်း မညံ့ပါ။ general အရ ပါတ်ဝန်းကျင်မှ လူများကို အခြေခံပြီး ကျမအမြင်ပါ။)
very nice post! :) good!
28/11/07 3:48 PM
woohoo. u found out great topic. I'm proud of you. he he. kwe kwe..
28/11/07 6:27 PM
Yan & thet >> ဟဟ.. အချင်းချင်းတွေကို.. လာမြှောက်နေပြန်ပြီ။ =) နင်တို့ကို တော်တယ်လို့ ရေးထားပေးတာနော်။ နောက်တစ်ခါတွေ့ရင် ငါ့ကို မုန့်ဝယ်ကျွေးရမယ်။
29/11/07 9:45 AM
hey, don't feel like that.........at least u cn compete with them............right???? sometime........they r stupid.........but they don't know........hahahhahahah
29/11/07 2:52 PM
yaw... khat par lar nor... he he he
Nakael Sidek Karim said...
Notaword....tak faham... :-p
30/11/07 9:55 AM
IT and Gender က စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရပဲနော်။ ယောကျင်္ားတွေက CPU လို တွက်ချက်မှုတွေမှာ စိတ်ဝင်စားပြီး မိန်းကလေးတွေက Hard Disk လို မှတ်သားတဲ့ အလုပ်တွေမှာ ထူးချွန်ပုံရတယ်နော်။ နောက်တစ်ခုက ယောကျင်္ားလေးတွေက အသစ်တီထွင်တတ်တဲ့ ဦးနှောက်ညာဘက်ခြမ်း အားကောင်းပြီး မိန်းကလေးတွေကတော့ မှတ်သားတတ်တဲ့ ဗယ်ဘက် ဦးနှောက်ခြမ်းက ပိုပြီး ဖွံ့ဖြိုးမယ်ထင်တယ်ဗျ။
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျောင်းတွေမှာ တွေ့နေကြကတော့ သိတဲ့အတိုင်း မိန်းကလေးတွေက စာအုပ်နဲ့ မျက်နှာ မခွာတဲ့ အချိန်မှာ ယောကျာင်္းလေးတွေက ပြေးလွှားဆော့ကစားနေတာ များတယ်ဗျ နော်။
ပြီးတော့ ယောကျင်္ားလေးတွေက ဘယ်အကြောင်းအရာမျိုးမဆို Logic နဲ့ လိုက်စဉ်းစားတတ်အပိုင်းမှာ သာမယ် ထင်တယ်။ မိန်းကလေးတွေကလည်း ဖြတ်ထိုးဉာဏ် ပိုသာတယ်ထင်တယ်ဗျ။
1/12/07 6:15 AM
အန်တီယဉ်>> သူတို့နဲ့ ပြိုင်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေကြတော့ ကိုယ်က လုံးဝကို မလိုက်နိုင်အောင်ကို ဖြစ်နေလို့..
Mr. thet>> မခက်ပါဘူး။ လွယ်လွယ်လေးပါ။
Nakael>> heehee… tunggu kejap.. Let me programaBurmese-BM translator.
ကိုမျက်လုံး>> အင်း.. ဟုတ်တယ်နော်။ အဲဒီ ဦးနှောက် ညာခြမ်း ဗယ်ခြမ်းတွေ အကြောင်း ဖတ်မိပြီဆိုရင် ယောကျာ်လေးသာ ဖြစ်လိုက်ချင်တယ်။ ကိုယ်လည်း ဆော့ချင်တာဘဲ။ အဲဒီ ဦးနှောက် ဗယ်ဘက်ခြမ်းကြောင့် စာကျက်နေရတာလို့ အပြစ်တင်ချင်လာပြီ။
3/12/07 10:12 AM
2/1/08 12:05 PM
myo kyaw htun>> okay.. i'll try to find and read.. :) thanks ..
11/1/08 10:13 AM
ah phong said...
မသဉ္စာရေ.. .. ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေကတော့ Women and Gender အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မသဉ္စာကို ကြိမ်းနေပြီ ... ဆိုလိုတာက Gender Issue အရ သူတို့ (ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်) ဆွေးနွေးစရာ အများကြီးရှိပါတယ် ခင်ဗျား။ ... ဒီထက် ပိုလို့ သူတို့ ဆွေးနွေးလိမ့်မယ့် ခင်ဗျား ... ကျွန်တော် ကိုတော့ ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်မှာ လာဆွေးနွေးပါခင်ဗျား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား .......
13/2/08 12:15 AM
ဟာဟ.. နည်းနည်းတောင် လန့်သွားတယ်။ ကျမရေးထားတာက တစ်ခါတစ်လေ ငြင်းလို့ မရတဲ့ IT and Gender သဘောကိုဘဲ အခြေခံတာပါ။ Women and Gender အခွင့်အရေးကို တစ်စက်ကလေးမှ touch မလုပ်ထားပါဘူး။ issues တွေကို ဆက်လက်ပြီး ဆွေးနွေးလိုရင် ဝမ်းမြောက်ကြောင်းပါ။
ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်မှာ လာဆွေးနွေးဆိုပြီး ကျွန်တော်က ဘလော့ဂ်လိပ်စာ ပေးမသွားတော့ ဘယ်နားမှာ လာဆွေးနွေးရမလဲကွယ်??
13/2/08 9:53 AM
အမရေ ... မနေ့ ည ကျွန်တော် ပြောတာ ဘာမှန်းမသိဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ အမရေးထားတာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ တွေအတွက်လဲ အလွန်မှ ကောင်းတဲ့ စိန်ခေါ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အမစာကို ကျွန်တော် ဟို တစ်နေ့က ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေကို forward လုပ်ပေးလိုက်တယ်လေ။ ဖတ်ကြည့်ပေါ့။ အဲ့ဒါနဲ့ သူတို့က အဲ့ဒီစာကို သိပ်အားမရဘူး ဖြစ်နေတယ် ထင်တယ်။ Gender ကိစ္စပေါ့။ ကျွန်တော်လဲ ပြောတာ အရင်းမရှိအဖျားမရှိ ပြောမိသွားတယ်။ အိုခေ .. အခု ပြန်ရှင်းပြတာပါ။ အမ ဘလော့ဂ်ကို သိပ်လာလည်လေ့ မရှိပေမယ့် ... ဟိုတစ်နေ့ လာလည်ရင်း လျှောက်ဖတ်ကြည့်ရင်း စိတ်ဝင်စားသွားလို့ပါ။ အမရေ .. နောက်များ အချိန်ရှိရင် ကျွန်တော့်ကို IT နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာသင်ပေးပါလားဟင် :).. Cbox လိုက်ရှာတာ မတွေ့တော့ comment မှာ အရှည်ကြီး လာရေးသွားတယ်။ မဟုတ်က ဟုတ်က လျှောက်ရေးတဲ့ ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ် လိပ်စာကတော့ ynphong.blogspot.com ပါ အမရေ။ ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်က ဘာ စိတ်ဝင်စားစရာမှ မရှိပါဘူး။ ခင်မင်စွာဖြင့် ..
13/2/08 11:20 AM
ah pong>> အင်း.. ဟုတ်တော့ ဟုတ်ပါတယ်။ အစ်မ ရေးထားတာလည်း အချက် အလက်တော့ မစုံဘူးလေ။ စဉ်းစားမိလို့ ထရေးလိုက်တာ။
လိုအပ်တာတွေကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးပေးပါဦး။ :)
19/2/08 9:47 AM